Instagram Font - Mpamorona Font tsara indrindra maimaim-poana sy Premium
"Izay endritsoratra Instagram tokony hampiasaiko?" dia fanontaniana renay be dia be, ary mora ny valiana! Misy karazana endri-tsoratra Instagram isan-karazany azo isafidianana: ireto ny endritsoratra Instagram 38 tsara indrindra ho an'ny filanao Instagram. Samy ho hitanao ato amin'ity lisitra ity. endritsoratra Instagram maimaim-poana maro.
Ŧ𝕆ｎＴⓢ 𝕆Ŧ ideｎⓢＴ𝓐𝐆Ř𝓐м
Instagram Font - Fonts Instagram Inona izany?
Ity dia fitaovana Instagram ahafahanao manova ny endri-tsoratra Instagram. Ireto manaraka ireto ny endri-tsoratra malaza indrindra ao amin'ny Instagram: Caps rehetra, Caps kely, Bubble Text, Square Text, Bold, Old English Text, Italic, Upside Down Text, Strikethrough, Invisible Ink, ary Zalgo. Ny fomba rehetra dia azo ampiasaina amin'ny media sosialy na sehatra fandefasana hafatra tsy misy fetra. Ny vokatra dia lahatsoratra miendrika Unicode tsotra ao amin'ny Notepad.
Ao amin'ny saha voalohany, ampidiro ny lahatsoratra tianao havoaka. Ny mpanova lahatsoratra dia manova ny lahatsoratra amin'ny fotoana fohy. Azonao atao ny mandika sy mametaka izany amin'ny Instagram, Twitter na Facebook. Ireo endri-tsoratra instagram ireo dia azo ampiasaina amin'ny mombamomba, endritsoratra instagram ary fanehoan-kevitra. Raha mila karazana lahatsoratra mitsilopilopy ianao dia afaka mampiasa tarehin-tsoratra emoji na Unicode mba hampifangaroana azy.
Ho an'izay liana:
Ny kisary novokarin'ity mpamorona ity dia tsy tena endri-tsoratra Instagram fa ny kisary napetraka. Ho an'ny Instagram, noho izany, azonao atao ny mandika sy mametaka azy ireo ao amin'ny bio sy ny fanehoan-kevitrao. Raha tena endritsoratra izy ireo dia tsy ho afaka handika azy any amin'ny toeran-kafa ianao (tsy misy dikany ny "mandika sy mametaka endritsoratra" - misafidy ny endri-tsoratra ampiasainao ny mpamorona tranonkala, izay tsy azo ovaina).
Fa raha antsoinao hoe font (na font Insta mihitsy aza, na font IGG raha fintinina ;), iza no miraharaha? Tsy natao hanaratsy ny fenitra Unicode izany. Tena mahagaga izany - marika lahatsoratra 100.000+, ao anatin'izany ny zava-drehetra manomboka amin'ny abidia fanozonana toa ireo aseho etsy ambony, ka hatramin'ny marika emoji hafahafa maneho zavatra an'arivony.
Raha misy amin'ireo tarehin-tsoratra tsy manam-paharoa voatanisa etsy ambony dia tsy tohana ao amin'ny bio anao Instagram (na miseho ho marika fanontaniana na efajoro tsotra), dia mety tsy ho eo amin'ny fitaovanao ireo tarehin-tsoratra Unicode ilaina. Satria midadasika tokoa ny protocol Unicode, dia ho ela vao hampiditra ireo marika rehetra amin'ny gadget ho avy, fa haingana ny fandrosoana ka mety ho iray na roa volana monja vao hanohana azy ireo ny navigateur/fitaovanao.
Ahoana ny fomba hamoronana endritsoratra Instagram?
Dingana 1: Mandeha https://instazoom.mobi/instagram-schrift/
Dingana 2: Ao amin'ny barazy, ampidiro ny lahatsoratra tianao hamoronana ny endri-tsoratra
Dingana 3: Adikao ny endritsoratra tianao ary apetaho eo amin'ny toerana tianao.
Ny endri-tsoratra Instagram dia mampisongadina ny fanehoan-kevitrao na ny tsipikao ary maneho ny toetranao manokana. Afaka misafidy malalaka ny rehetra. Raha misy fanontaniana momba ity fitaovana ity avy aminay dia afaka mametraka hafatra aminay ianao: fifandraisana